Professional email, dzivisa zvakajairika mafomula!
Yakatumirwa ne Tranquillus | Dec 1, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Mafomati anehuremekedzo ekudzivirira pakutanga kweemail
Zvakaoma kuziva mashoko ose okuremekedza. Nezve maemail ehunyanzvi, anogona kushandiswa pakutanga uye pakupedzisira. Nekudaro, kusiyana nemamwe maemail anotumirwa kushamwari kana vaanozivana navo, matauriro ane hunhu mutsamba yako yebhizinesi anofanira kusarudzwa nekuchenjerera kukuru. Pakutanga kweiyo email, mamwe acho anofanirwa kudzivirirwa.
"Mhoro" kune mukuru wepamusoro: Sei uchirega?
Kutanga kweemail yehunyanzvi kunotoita sarudzo. Sechikamu che e application kana email kuti itumirwe kune wepamusoro, hazvikurudzirwe kutanga email yehunyanzvi ne "Hello".
Chokwadi, fomura ine ruremekedzo "Mhoro" inosimbisa kujairana kukuru pakati peanotumira neanogamuchira. Zvinogona kunzwisiswa zvakashata kunyanya kana zviri zvemutori wenhau wausingazive.
Muchokwadi, iyi fomula hairevi hutsinye. Asi rine mutauro wose unotaurwa. Inokurudzirwa kuishandisa kune vanhu vaunosangana navo nguva dzose.
Semuenzaniso, kana iwe uchida kunyorera basa rekupa, hazvitombokurudzirwe kuti uti mhoro kumunhu anopinza basa muemail yako yehunyanzvi.
Mukuwedzera, inofanira kuyeukwa, hainawo kukurudzirwa kushandisa smileys mune imwe nyanzvi email.
Kutanga kweemail: Nderupi rudzi rweruremekedzo rwandinofanira kushandisa?
Panzvimbo pekuti "Mhoro", inoonekwa seyakajairwa uye isina munhu, tinokurudzira kuti ushandise mutsara wekuremekedza "Monsieur" kana "Madame" pakutanga kweemail yehunyanzvi.
VERENGA Nzira yekukurumidza kugadzirisa spelling yemagwaro ako, kuwanikwa Antidote software.
Chokwadi, kana yangoendeswa kune maneja webhizinesi, maneja kana munhu wausina hukama naye. Zvakanakisisa kushandisa marudzi aya ezvirevo.
Fomula iyi inogamuchirwawo kana waziva kuti mutori wenhau wako murume here kana kuti mukadzi. Zvikasadaro, iyo yakanyatsokodzera nzira yeruremekedzo ndiyo yakajairwa "Madam, Changamire" formula.
Tichifunga kuti unotoziva mutori wako wenhau, unogona kuzoshandisa ruremekedzo rwekuti “Dear Sir” kana “Dear Madam”.
Iyo fomu yekufona saka inofanirwa kuperekedzwa nezita remutauri wako. Kushandiswa kwezita rake chairo kwakaipa. Kana zvikaitika kuti hauzive zita rekutanga remunyori wako, tsika inokurudzira kushandisa "Mr." kana "Ms." sefomu rekufona, richiteverwa nemusoro wemunhu.
Kana iri iyo e-mail yehunyanzvi inofanira kutumirwa kuPresident, Director kana Secretary General, mutsara wekuremekedza uchange uchiti "Mr. President", "Madam Director" kana "Mr. Secretary General". Iwe unogona kunge uchiziva zita ravo, asi ruremekedzo runoraira kuti uvadane nezita ravo.
Uyewo yeuka kuti Madame kana Monsieur inonyorwa zvizere nebhii rekutanga mumabhii makuru. Mukuwedzera, imwe neimwe nzira yekuremekedza pakutanga kweemail yehunyanzvi inofanirwa kuperekedzwa necomma.
Professional email, dzivisa zvakajairika mafomula! Zvita 1, 2021Tranquillus
pashureNdeupi rudzi rweruremekedzo rwekutumira kutenda mune email yehunyanzvi?
zvinoteveraMatauriro anehuremekedzo ekudzivirira mune email yehunyanzvi
Polite mafomula pakupera kweiyo email mune yakasarudzika mamiriro